Nin lagu eedeeyey in uu 9-caruur ah soo xaday oo lagu xukumay 12-sano oo xarig ah
Boosaaso:-Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa saaka waxaa la keenay nin dhalinyaro ah oo la sheegay in uu ku eedeysan yahay in uu soo kaxaystay caruur gaaraysa ilaa 9 caruur ah oo uu soo xaday si uu uga ganacsado una geeyo dalka soomaaliya dibadiisa , caruurta nin kaan lagu qabtay ayaa waxaa ay da’doodu u dhexeysaa 8 jir ilaa 15 jir.
Ninka la horkeenay Maxkamada darajada 1aad ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Ibraahim Cumar Liibaan
da’diisuna ay tahay ilaa 40 jir, Xeer Ilaaliya Maxkamada darajada 1aad ee Gobolka Bari Bashiir Ismaacil Hoobaley ayaa ku eedeeyey
Ibraahim Cumar in uu ciyaalkan soo xaday uuna doonayey in uu si tahriib ah ku geliyo dalka Sacuudiga si uu uga ganacsado.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamada darajada 1aad ayaa xusay in baaritaan ka dib ay ogaadeen in caruurtaan laga soo xaday tuulada Buulo Mareer ee gobolka Shabeelada Hoose, Xeer ilaaliyaha Maxkamada Bashiir Ismail ayaa codsaday in 25 sanno oo xariga ah iyo 5000 oo dollar uu bixiyo eedeysanaha.
Eedeysane Ibraahim Cumar Liibaan oo loo ogolaaday in uu is difaaco lana hadlo saxaafada ayaa sheegay in caruurtaan uusan soo xadin uuna ka war hellay in ciidanka Booliska ay ka soo kaxaysteen guriga ilma isaga oo magaalada ku maqan ka dibna uu isagu u yimid ciidanka amaanka ka dibna uu codsaday in dib loogu celiyo meeshii uu ka yimid isagana uu ilmaha soo kaxaystay ilmihiisana yihiin.
Guddoomiyaha maxkamada darajada 1aad Sh. Aadan Aw-Axmed ayaa waxaa uu sheegay markii uu dhagaystay dacwada ay Maxkamadu darajada 1aad ay ku riday 12 sanno oo xariga ah eedeysane Ibraahim Cumar Liibaan ,Hay’ada Islaamiga ah ee Tadaamun kana howl gashay degaanada dalka Soomaaliya ayaa balan qaaday in ay daryeeli doonto Caruurtaan ilaa inta laga hellayo ciddii dhashay ilmahaan
One comment on “Nin lagu eedeeyey in uu 9-caruur ah soo xaday oo lagu xukumay 12-sano oo xarig ah”
Sharif Dalmar on April 17, 2012 at 7:39 pm said:
waa mid ka mid ah dhibaatooyinka uu keenay burburkii ku dhacay dalka soomaaliyeed,waxaase na siib dara ah in aana lagu cibra qaadan wax yaabaha dhacaayo maalin walba.